Chondrichthyes: sifooyinka, noocyada iyo taranka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
ka Xariir (Chondrichthyans), oo sidoo kale loo yaqaan kalluunka cartilaginous, waa koox ka kooban laf-dhabarta biyoodka qadiimiga ah. In kasta oo ayan u badnayn ama u kala duwanayn sida kalluunka lafaha, la qabsigooda qaab-dhismeedka, unugyada muruqa dabaasha, xubnaha dareenka, iyo caadooyinka ugaadhsiga xoogga leh iyo daanka ayaa tilmaamaya in la siiyay xaalad deegaan oo adag oo deegaanka ay ku nool yihiin.
Maqaalkani waxa aanu kuu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Chondrichthyes, sifooyinka iyo bayoloji.
1 Astaamaha ugu muhiimsan ee Chondrichthyes
2 Dabbaasha Chondrichthyes
Astaamaha ugu muhiimsan ee Chondrichthyes
Waxaa jira laba nooc oo kalluunka cartilaginous ah. Marka xigta, waxaan ku tilmaami doonaa sifooyinka ugu muhiimsan:
Shark iyo fallaadho ayaa iska leh kooxdan xayawaanka ah. Qaarkood waa hilib hilib ah, waxay ka helaan ugaadhsigooda iyaga oo maraya xubnahooda urta sababtoo ah korriinkooda aragga oo liita. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira in ka badan 400 nooc oo shark ah oo ku jira 8 dalab iyo ilaa 500 nooc oo fallaadho ah 4 amar. Xagga sharkiga, badidood waxay leeyihiin sifooyin soo socda:
Jirka: Jir u eg dunta dunta oo weji fiiqan leh oo caloosha ka horeyso. Dabada jidhku waxa ay leedahay dabo xidhan oo aan caadi ahayn, taas oo ah in ay jiraan laba qaab iyo qaab dhismeed oo kala duwan oo caleemo ah, kuwaas oo mid ka mid ah ay ka kooban tahay dhammaadka laf dhabarta, midda horena waxa ay leedahay laba baal oo miskaha ah, lammaane miskaha ah. , iyo laba laab. fins aan caadi ahayn. Labka, fins-ka miskaha ayaa hore loogu beddelay xubnaha galmoodka ee lammaanaha waxaana loo yaqaannaa glycoptera, pteropods, ama genus.
Aragga, maqaarka iyo xubnaha soo-dhowaynta: marka la eego afka, waxay leeyihiin lebis, hawo iyo dulalka hore ee sanka. Indhuhu ma laha dabool, inkastoo noocyada qaarkood ay leeyihiin xuub nuujin, oo leh stoma gadaashiisa dabool kasta. Maqaarku waa adag yahay oo noocyada qaarkood waxay u eg yihiin warqad ciid ah, waxay leedahay miisaan qaabeysan, oo sidoo kale loo yaqaan 'dermal scales', kuwaas oo loo habeeyey si loo yareeyo qulqulka iyo wejiga gadaal. Waxay leeyihiin neuromas jirkooda iyo madaxooda oo dhan, kuwaas oo aad xasaasi u ah qaboojiyeyaasha gariirka iyo qulqulka biyaha. Waxa kale oo ay leeyihiin reseptors gaar ah oo ka ogaan kara ugaadhsiga iyada oo loo marayo beerta koronto ee ay sii daayaan, waa Lorenzini finan ku yaal madaxa.
Ilkaha Ilkuhu kuma biiraan daanka hoose, waxaa jira laba saf, safka ugu dambeeya wuxuu bedelayaa ilkihii maqan ee safka hore, sidaas darteed ilkaha cusub mar walba way kori karaan. Marka loo eego noocyada, kuwani waxay yeelan karaan qaab silig ah si ay u gooyaan cuntada, fiiqan oo leh shaqo xajin ah, marka la eego noocyada xariijimaha, waxay leeyihiin ilko fidsan oo dusha laga xoqi karo.
Lafaha iyo dabaasha: Waxay leeyihiin lafo carjawda macdanaysan, oo aan lafaha kale ahayn sida kalluunka kale. Sidoo kale, ma laha kaadi-haysta dabaasha, taas oo sababta inay si joogto ah u dabaasho ama u joogaan hoosta, haddii kale way quusan doonaan. Dhanka kale, waxay leeyihiin beer weyn, kaas oo ka kooban lipids (squalene), kaas oo sidoo kale ka ilaaliya inuu quusto.
Chondrichthyes gudaheeda waxaan ka helnay kooxdan ay ku jiraan chimeras. Kooxdan yar ayaa maanta ka kooban ilaa 47 nooc. Anatomically waxay leedahay isku dhafka elasmobranch iyo jilayaasha kalluunka lafaha:
Jirka: Waxay leeyihiin qaab aad u la yaab leh, jidhkoodu waa dheer yahay oo madaxyada ayaa soo baxaya, waxay leeyihiin qaab-dhismeed classic ah oo taageeri kara dheddigga xilliga guurka. Sankiisu waa sida bakayle, dabadiisuna waa karbaash oo kale.
Daanka iyo ilkaha: Ilko ma laha, laakiin waxay leeyihiin taargooyin siman oo ballaadhan. Daanka sare waxa uu si buuxda ugu dhex milmay dhakada, si ka duwan kuwa kale, waa meesha ay magaceedu ka yimid (holo = all, all and cephalo = head).
Cabbir: Dhererkoodu wuxuu noqon karaa ilaa 2 mitir.
difaaca: Dhabarkeeda dhabarku waxa uu leeyahay laf-dhabar sun ah.
Cunto: Cuntodoodu waxay ku salaysan tahay qolof, mollusks, echinoderms, kalluunka yaryar, iyo algae, kuwaas oo ah cuntooyin isku dhafan oo ay shiidaan xilliga quudinta.
Elasmobranchs waxay leeyihiin miisaan maqaarka ah, taas oo u oggolaanaysa inay yareeyaan qaska marka ay dabaashanayaan. Dhanka kale, oo ay la socdaan beerkooda dufanka leh, awoodda ay u leeyihiin inay hawadu liqaan, iyo baalkooda, waa dabaasha aad u fiican oo la qabsigan ayaa u oggolaanaya inay ku sii jiraan biyaha. Baalal qariib ah ayaa kaa dhigi kara lulid, oo xataa baalalku way ku xakameyn karaan. Dhanka kale, garabka danbe wuxuu xakameyn karaa riixida wuxuuna dhalin karaa xoog joojin sababtoo ah qaabkiisa aan caadiga ahayn.
Fallaadhaha Manta waxay la qabsadaan nolosha biyaha hoostooda, jirku waa fidsan yahay, oo leh baalal direyska ah oo balaadha oo ku milmay madaxa, una dhaqma sidii baalal marka aad dabaalanayso. Ilkahoodu waa fidsan yihiin, oo awood u leh inay xoqaan oogada iyo shiidida cuntada, kuwaas oo badanaa ah qolof, mollusks iyo kalluunka yaryar.
Dabadoodu waxay u egtahay karbaash, oo leh hal ama in ka badan oo lafdhabarta dhamaadka, kuwaas oo ku xiran qanjidhada sunta ah ee noocyada qaarkood. Waxa kale oo ay leeyihiin xubno koronto ah oo ku yaal labada dhinac ee madaxooda, kuwaas oo soo saari kara shoog koronto oo ay ka yaxiyaan ugaadha ama bahalkooda.
Kalluunka cartilaginous wuxuu leeyahay bacrin gudaha ah iyo habab taran oo kala duwan oo aan hoos ku arki doono:
Oviparous: Isla markiiba bacriminta ka dib waxay dhigaan ukumo-yolk-buuxsan yahay. Shark iyo fallaadho badan ayaa ugxantooda ku ridaya kiish keratinous ah. Fiilooyinka u eg Tendril waxay sameeyaan dhamaadka sac, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu dhejiyo shayga ugu horreeya ee adag ee ay taabtaan. Embriyooyinku waxay ku samaysan karaan 6 bilood ilaa 2 sano gudahood. Caadi ahaan qaabkani wuxuu ku dhacaa noocyo yaryar oo benthic ah, kuwaas oo dhigi kara ilaa 100 ukun.
Viviparous: Waxay yeelan doonaan mandheer dhab ah oo uurjiifku ka cuni karo. Habkan taranka ayaa kor u qaaday guushooda korriinka ee kooxdan. Waxay ku dhacdaa ku dhawaad ​​60% kalluunka cartilaginous iyo noocyada firfircoon ee waaweyn.
Oviviparous: Waxay embriyaha ku hayaan tuubada ugxan-sidaha inta lagu jiro korriinka uurjiifka waxayna ku quudiyaan kiishkeeda jaalloyadeed ilaa inta ay ka dhalanayaan. Dhanka kale, waxay embriyaha siisaa noocyo kala duwan oo cunto ah, sida lecithin, halkaas oo uurjiifku ku quudiyo ukunta ukunta; nafaqada nudaha, halkaas oo hal ama in ka badan embriyaha lagu nafaqeeyo dareeraha (nafaqada unugyada) ee uu soo saaro villi oo ku yaal gudaha gudaha ilmo-galeenka. Dhanka kale, waxaa jira ugxan-yari, oo ah, embriyaha oo quudiya ukunta bacrimiyay marka ay ku jiraan ilmo-galeenka. Ugu dambayntii, waxa uur-ku-jirka ku jira geedo yaryar ama cannibalism.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto Chondrichthyes iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Xariir